Stainless Simbi Sink, Kitchen Sink, Bathroom Basin - NODMA
Mukombe Washer Sink
Girazi Pamusoro Sink
Kaviri Bowl Sink
NODMA - piyona mumagumo epamusoro
kicheni sink industry
mugadziri wepasi rose wesimbi isina tsvina yekicheni sinks
TENGA ZVINO INQUITY ZVINO
Innovation Dhizaini Mubairo
Sample Kugadzirira Mazuva
NODMA ine mhando dzakasiyana-siyana dzemhando, dzinosanganisira masingi esimbi isina tsvina, mapombi, mabheseni esimbi ekugezera, uye zvakasiyana siyana zvekutengesa.Iyo itsva dhizaini yezvigadzirwa inogona kukubatsira kutora chikamu chemusika zviri nani uye kuwedzera kunamatira kwevatengi.
Stainless Simbi Sinks
NODMA Stainless simbi sink yave kushandiswa zvakanyanya mumahotera, maresitorendi, mabara, uye masangano everuzhinji.Haisi yakanaka chete asiwo nyore-ku-kuchenesa masingi esimbi isina tsvina ine mhando yemhando yepamusoro.Heano matatu epamusoro simbi isina simbi masingi akagadzirwa neNODMA yereferensi yako:
Diki Yakagadzirwa Nemaoko Sink Ine Cup Rinser NQ466
Luxury Handmade Sink SUS304 Stainless Simbi Chivi...
Black Multi-Inoshanda Nano Kitchen Sink Stain...
Multi-function Pamusoro gomo Kitchen Sink MT948B
Stainless Simbi Bathroom Zvigadzirwa
Stainless simbi mabheseni uye niches ane hushamwari zvakatipoteredza uye anogara.Mukuwedzera, mavara akasiyana uye saizi yakatarwa inogona kusangana nemhando dzakasiyana dzekushongedza imba.
Stainless Simbi Rectangle Bathroom Basin
Stainless Simbi Round Bathroom Basin
Stainless Simbi Niche
Ndapota siyai kwatiri uye tichave tichibata mukati memaawa makumi maviri nemana.
Anotungamira Mugadziri weKitchen Uye Bathroom Zvigadzirwa
NODMA inyanzvi yesimbi isina simbi inonyura mugadziri uye mutengesi muChina ane anopfuura makore makumi maviri echiitiko.
NODMA inogadzira yakazara, inotungamira indasitiri mukugadzira kicheni nemidziyo yekugezera.
NODMA yakazvipira kugadzirisa marudzi ese ematambudziko mukumisikidza uye kushandisa kupa yakanakisa ruzivo kune vatengi.
VERENGA UYE TEERERA NYAYA
NODMA inongogadzirwa nePOSCO simbi isina tsvina, iri 100% inogona kudzokororwa uye ine hushamwari.Iyo inbound mbishi zvinhu zvinokuunzira iwe musanganiswa wakanaka pakati pekunaka uye kushanda uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza nedhizaini yemazuva ano.
Iwe unogona kuraira sink yetsika inonyura maererano nezvaunoda.Kunyangwe vatengi vanofanirwa kutiudza musika waunonangwa, uye isu tichakugadziridza chigadzirwa zvinoenderana nehunhu hwemusika wako.Isu zvakare tine zvakasiyana-siyana zvitsva uye zvakasarudzika zvigadzirwa zvekugadzira kuti zvikubatsire kubata kutarisisa kwevatengi vako nekukurumidza uye nekudaro kutora musika.
3 Mazuva Sample Yekutumira Nguva
Chikwata chedu chekugadzira chine makore anopfuura gumi echiitiko mukugadzira masampula.Mazuva matatu ekutungamira nguva yemasampuli akagadzirwa nemaoko anotendera iwe kuti utore sampuli yako, simbisa mhando, uye kuyedza musika nekukurumidza.
NODMA zvigadzirwa zvakatevedzana zvinosanganisira masingi ekicheni, mapombi, mabheseni ekugezera, uye zvishongedzo.Madhishi ane mbiya imwe chete, madhishi maviri embiya, mbiya imwe chete inonyura ine draining board, kaviri mbiya inonyura ine draining board, uye multifunctional sinks-yakasiyana-siyana yezvigadzirwa kuti isangane nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi.Pamusoro pezvo, kusimba kwemasingi kusangana nechiitiko chekupedzisira chechigadzirwa chemutengi.
Ndezvipi zvinhu zvezvigadzirwa zvako?
Izvo zvinhu ndeye SUS 304 simbi isina tsvina.
Tingasvika sei pakuziva kunaka tisati taisa odha?
Samples inopihwa yekuongororwa kwemhando.
Tine pre-kugadzirwa sampuli isati yagadzirwa yakawanda.Isu tine ongororo yakazara isati yatumirwa;
Ndeupi musiyano uripo pakati pekudzika nepamusoro pekunyura?
Undermount sinks akaiswa pasi pe countertop.Drop-in kana topmount sinks inoiswa pamusoro pekaunda.
Ndeipi mitemo yekubhadhara?
Kazhinji TT, kana imwe sechikumbiro chako.
Tora MAMWE EMASAMPLES Nhasi
Tinoda kunzwa kubva kwamuri!Titumire meseji uchishandisa fomu rakapesana, kana kuti email.Wed ndinoda kunzwa kubva kwauri!Titumire meseji uchishandisa fomu riri pazasi
Maitiro ekudzivirira ngura muStainless Simbi Sinks
Ndeipi gauge Stainless simbi sink ndiyo yakanakisa?
Nharembozha yebasa: +86 13925333418
Kero: Nodma imba tekinoroji, 110-1 Gaoping Avenue, Sanjiao Town, Zhongshan Guta, Guangdong Province
© Copyright 2021 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.>